Burundi: Mr Mbonimpa oo la toogtay - BBC News Somali
Burundi: Mr Mbonimpa oo la toogtay
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, Ban Ki-moon, ayaa ku baaqay in la baaro toogashadii nin u dhaqdhaqaaqa xuquuda aadanaha dalka Burundi.
U dhaqdhaqaaqaha xuquuqda aadanaha, ayaa hadda ku jira qaybta xaaladda degdega ah mid ka mid ah isbitaalada caasimadda, halkaas oo si xoog leh loo xadiday galitaankeeda tan iyo markii shalay la dhigay.
Mr Mbonimpa, ayaa weerarkiisu uu dhacay maalin kaddib dilkii Axaddii ee general ciidamada ka tirsanaa oo ahaa saaxiib ay isku dhow yihiin madaxwayne Pierre Nkurunziza, taas oo dhalisay cabsi ah in rabshaduhu ay sii kordheen.
Pierre Claver Mbonimpa ayaa ahaa nin u ololeeya xuquuqda aadanaha dalka Burundi.
Dhowr jeer oo hore ayaa la xiray kaddib markii uu ku eedeeyay dowladda xadgudubyo xuquuqda aadanaha ah, gaar ahaanna kuwa ay gaysteen hay'adda sirdoonka, xilligii uu hoggaaminayay jeneraalka ciidamada ee Isniintii la toogtay.
Mr Mbonimpa ayaa ahaa xubin firfircoon oo aad uga soo horjeeda in mar saddexaad uu isa soo sharaxo madaxwayne Pierre Nkurunziza, oo uu si aan qarsoodi lahayn u taageeray dibedbaxyada looga soo horjeedo tallaabada uu madaxwaynuhu qaaday.
Diblomaasiyiin badan oo ajnabi ah, ayaa isbitaalka ku booqday u ololeeyaha xuquuqda aadanaha dalka Burundi. Bulshada caalamka ayaa ku dhiirigalisay dhinacyada in ay wadahadlaan si xal loogu helo dhibaatada siyaasadeed ee dalka Burundi.
Isagoo hadlayay weerarka kaddib, ayaa ku xigeenka kooxdan xuquuqda aadanaha wuxuu sheegay in weerarka lagu qaaday hoggaamiyahooda uusan ahayn mid lama filaan ah, balse la sii qorsheeyay sababtoo ah waxay horay u sii maqleen qorshaha dilka, ka hor inta uusan dhicin.
Dhinaca kale, xalay ayaa rabshado kale la soo sheegay, iyadoo rasaas ay ka dhacaysay qaybo kala duwan oo caasimadda. Waxaa soo baxaya warar badan oo sheegaya in ugu yaraan laba baabuur iyo bajaaj lagu gubay qaybo kala duwan oo magaalada ah.
Shalay maqribkii, hal qof ayaa ku dhintay xaafad ka mid ah magaalada.